Yintoni impazamo 0x80070057 kwi-Xbox? - Ikhowudi Yemo
Eyona > Ikhowudi Yemo > Ikhowudi yemeko 80070057-indlela yokulungisa
Ikhowudi yemeko 80070057-indlela yokulungisa
Yintoni impazamo 0x80070057 kwi-Xbox?
Uyabona oku kulandelayoimpazamoikhowudi xa uzama ukubukela ividiyo kwifayile yakhoXboxIkhonsoli ye360: Ikhowudi yemeko:80070057. Oku kuthetha enye yezi zinto zilandelayo: Ifayile yevidiyo yonakele. Ifomathi yefayile yevidiyo ayixhaswanga yiXbox360.
wenze lo msebenzi ngokwahlukileyo kunye nefoto encumileyo yenze izigqibo ezithile
Ndiyilungisa njani ikhowudi yempazamo 80072741?
Isisombululo 4: Cima i-gamertag yakho kunye nokucoca i-cache yakho
Khipha naziphi na izincedisi eziqhotyoshelwe kwikhonsoli yakho, njenge-headset, i-Xbox 360 Chatpad okanye iSensor Kinect.
Cima iprofayile yakho. ...
Coca i-cache yenkqubo yakho kabini. ...
Fumana kwakhona i-gamertag yakho. ...
Qala kabusha ikhonsoli yakho.
Ngomhla we-10 kuCanzibe 2021
Hee bafo, uh Rashad Espinoza apha ndiza kufika kwinqanaba, ke kuye kwafuneka ndidlale i-Myxbox ezantsi kwigumbi lokuhlala kwaye i-pun kwi-Xbox Live iya kuba kukucofa intambo ye-ethernet ngqo kwi-router yethu eyi-Belkin ukuba iyanceda nabani na kodwa andiqondi ukuba ibalulekile kuba le nto inokusebenza kuwe uyazi naphina apho uyisebenzisa khona ndisandula ukuphumelela kwaye umama wathenga itv yam kwaye intle kakhulu kwaye ngokusisiseko ndiyadlala egumbini lam ngoku kwaye ngokucacileyo i-router ndisezantsi ngenxa yokuba sinekhompyuter yosapho kodwa ndinelaptop yam ingxaki yam yayiyindlela yokudlala i-xbox bukhoma ngelixa ndisegumbini lam kunye ne-tv yam entsha entle endikhe ndayifumana ndakhangela i-youtube kwaye ndafumanisa ukuba ungadibanisa ibhulorho unxibelelwano okanye nantoni na wonke umntu uyazi ukuba angayenza njani loo nto, kodwa kukho ukwabelana ngenethiwekhi kakhulu okanye enye into ndiye ndaxhuma intambo ye-ethernet enye ukuya kwi-xbox, ngokucacileyo zonke izibuko ezikwilaptop yam apha kwaye ndiyenzile loo nto ngokwabelana ngenethiwekhi okwenzayo inqaku lendlela yokwenza oko kodwa wena mhlawumbi andifuni xa ndenza le nto ndicofe yonke into eplagiweyo ndizama ukungena kwi-Intanethi kwaye ndiza kudibanisa kodwa kuqala xa ndingena kuthatha malunga neeyure ezintlanu, hayi iiyure ezintlanu, kodwa lixesha elide lokuba ndisayine ukuya kuthi ga ngeli xesha ndazi ukuba iiGamertags zikunqwenela ukubulala i-cherishto yokubulala ikwi-Intanethi uyazi ukuba izakuvela kwaye ekuphela kwethebhu ezikudeshibhodi endinazo ziya kuba ngabahlobo bam, bayazi ukuba bangabahlobo kunye ne-xbox yam kwaye ndinje Kulungile, imalunga nantoni kuba ndifuna uyazi ukuba andisebenzisi igama lokwamkela, kodwa uyazi ukuba kuqhubeka ntoni, layisha iMattPatrick kwinkonzo yomnxeba entsha, nokuba yeyiphi na kwaye ke ndifumana le khowudi yenqanaba le-8. Isixhenxe, isixhenxe, isine, inye, ewe, bendinezinto ezininzi ezintle endizikhumbulayo, kodwa, ewe, ndiye ndakhangela kwi-intanethi ndisoloko ndinazo izisombululo ezifanayo, nokuba kukho into engalunganga kwicala leMicrosoft okanye into esecaleni lakho ithetha uqhagamshelo lwakho okanye uthungelwano lwakho kumzila wakho ndaye ndakhangela kumngxunya wam a Inye into oyaziyo, idilesi 192.168.1.1 andinakukunceda oko ndiyathetha ewe ndifumene uhlobo lwenethiwekhi yam ukuvula kodwa idashboard yam ibisamile kwaye bendiqhubeka nokufumana ikhowudi yenqanaba into endiyenzileyo yayijonga emva kweentsuku ezintathu yokuzama ukulungisa oku ndiye kwinethiwekhi yam apho ndiya khona, kulungile ndizokuxelela ukuba bendiyifuna kangakanani ndiqala ukuqala ndisebenzisa iiwindows Vista ndive ukuba ndiya kwinethiwekhi yenethiwekhi yabelana ngoku kwaye ayisekho eLittletab Imenyu yokutsala ngokulula kulula ukubona kwaye kukho phantsi kwecandelo lovavanyo ngasekhohlo, xa uvula inethiwekhi kwaye wabelana kukho unxibelelwano lwenethiwekhi olulawulwayo ukuba unento efanayo endibambeke kuyo ndisebenzisa i-intanethi yam x ibhokisi yam kwilaptop yam ukufumana uqhagamshelo mhlawumbi awufuni ukusebenzisa isabelo sothungelwano kuba yonke into oyifumana kwi-router yakho ikuthumela nje njengophawu okanye nantoni na oyifunayo luludibaniso olufanayo olufumana apha ngezantsi okanye le yile router yakho, uqhagamshelo olufanayo, hayi ikaka oh apha udityanisiwe, nantsi ikunika ilitha kancinci, kodwa ayisiyiyo indibaniselwano ye-intanethi yokwenyani ukwenza isivumelwano sokwenyani endaweni yokwenza izabelo zenethiwekhi ndiyenzile yonke into, ewe, ndiza kuvala nje unxibelelwano kwaye oku kuyakusebenzela, yiyo le ndiyitshoyo, Ndinayo ke le nto izakuyithetha, kufanele ukuba ubuncinci ithi kufuneka ubenonxibelelwano lwasekhaya oluyintambo ye-ethernet oyifakileyo kwaye xa i-wifi yakho inikwe amandla uqhagamshelo lwenethiwekhi olungenazingcingo lwenziwe lwangempela nokuba yeyiphi na iWiFi, yile my Belkin Ke ekuqaleni ingakusebenzela ngamanye amaxesha, kodwa ekuqaleni bendiqhagamshelwe kwi-intanethi kwaye hayi hayi bendinokwabelana ngenethiwekhi kuvuliwe kwaye kwenziwa ilinge lokuyivala kwaye ayizukusebenza ke kuya kufuneka usebenze inethiwekhi Ukwabelana ngokudibanisa ezi zinto zimbini zonxibelelwano ngokuqaqambisa uqhagamshelo lwakho lwe-WiFi kunye nonxibelelwano lwe-LAN ngaxeshanye okanye ucofe enye ubambe i-Ctrl ucofe k enye, nantoni na ofuna ukuyenza, vele ugqamise zombini kwaye ucofe ekunene ucofe kwaye ilungile apho ithi t Unxibelelwano lwebhulorho luthatha malunga nemizuzwana engama-30 engama-30 hayi ixesha elininzi lokufumana i-Xbox yakho ibuyele esiqhelweni kodwa ewe emva kokuba wenze oko ukuphuma ukuba unayo? sayina ungene kwi-Xbox uphume uphume kwakhona kwaye kukho ideshibhodi yakho kufuneka ibuyele kumyalezo wekhowudi yenqanaba akukho sithuko kubantu abathandana nesini esiphelile ngathi siyacinywa akusekho moss ayikho nawe awufuni kwazi umnqweno wokuthatha i-TV yakho kwaye uyilahle ngefestile, ngethemba lokudibana nabantwana abamsulwa.
Ndididela ukuba kufanele ukuba yindlela oyilungise ngayo ikhowudi yenqanaba ezisibhozo zero zero ezisixhenxe ezisixhenxe ezine enye ye-xboxlive ewe hayi andizukuthetha ngeMicrosoft nangona? khange ndincede kodwa uyazi ndiyacinga yonke into ibalulekile ke ndiyilungisile ngoluhlobo ukuba ndincedile ndiyavuya ukuba ndingakwazi ukuba andenzi njalo ndiyaxolisa ndimoshe imizuzu emithandathu nditshintshe ubomi bakho andixoli nyani , Ndiyaxolisa doneso yiyeke kumagqabantshintshi ukuba unayo nayiphi na imibuzo ndiqinisekile ukuba khange ndiyenze yonke le nto kodwa enkosi
Inguqulelo yeWindows 10.0.10240
Yintoni ikhowudi yempazamo ox80070490?
Inkqubo ye-Impazamo 0x80070490yiikhowudi yobumeukutyikitya ifayile eyonakeleyo okanye inkqubo kwiVenkile yeNkqubo yeNkqubo okanye kwiNkonzo esekwe kwiCandelo (i-CBS). ... Iifayile ezonakalisiweyo kwiNkonzo esekwe kuCandelo (i-CBS) okanye kwiVenkile yeNkqubo yeNkqubo. Ezinye iinkonzo ezifunekayo yi-WU zikhubazekile ngesandla.Meyi 4, 2021
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje, ndiza kukubonisa ukuba wenzeni xa uzama ukuphucula inkqubo yakho yeWindows kwaye ufumana le mpazamo 0x80070490 kunye nendlela yokulungisa. Impazamo iqhele ukwenzeka xa abasebenzisi bazama ukufumana inguqulelo yeWindows yeWindows ngenkonzo yoHlaziyo lweWindows. Kutheni uyibona yenye yezona zinto zibangela le mpazamo 0x80070490 ngamacandelo onakalisiweyo kuMphathi wePhakheji yokuSebenza ngokuSekwe kwiCandelo.
Njengomphumo womonakalo, isifakeli sinokuthintela ukuba ungagqibi uhlaziyo ukuze inkqubo ingakwazi kuhlaziywa ngaphandle kokuba umsebenzisi athathe amanyathelo ongezelelweyo ukongeza kwiWindows 10, iinguqulelo ezidlulileyo- iWindows 8 kunye ne-7- nazo ziyathandeka. kulo mbandela. Kukho iindlela ezininzi onokusebenzisa ngazo uHlaziyo lweWindows kwiWindows ukusombulula ukhuphelo lwakho kunye nokufaka ingxaki yokuhlaziya.
Usebenzisa Isixhobo Sokukhangela Isixhobo seFayile usebenzisa isiXokelelwano seFayile sokuKhangela isiXhobo, isixhobo esakhelweyo sokubuyisa iifayile zenkqubo ezonakalisiweyo. Ukuyiqala kufuneka usebenzise i-Command Prompt. Ukwenza oku, ngenisa 'cmd' kwibhokisi yokukhangela kwaye c cofa ukuze uyiqale njengomlawuli.
Kwiwindow ye-Command Prompt, faka lo myalelo ulandelayo: sfc / scannow Iya kuqala ukuskena ikhompyuter yakho, nekungafanelekanga ukuba inde kakhulu. Xa ukukhangela kugqityiwe, vala iWindows Command Prompt kwaye uqalise ukusebenza kwakhona kwenkqubo yokusebenza. Nje ukuba wenze, uHlaziyo lweWindows lweWindows kufuneka lusebenze ngokufanelekileyo kwaye le mpazamo kufuneka ihambe.
Qala kabusha iWindows Update Service ukuba indlela yokuqala ayincedanga, zama ukuqala kwakhona inkonzo yokuHlaziya yeWindows. Kwibhokisi yokukhangela, chwetheza 'iinkonzo' emva koko ufumane uHlaziyo lweWindows kwiWindows kwaye uyivule. Kwifestile evulayo, qiniseka ukuba uhlobo lokuqalisa lusetelwe 'Zenzekelayo', yiyeke, kwaye uyiqale kwakhona.
ps3 isilawuli asichazwanga
Ngaphandle koko, cofa ekunene kwinkonzo kwaye ukhethe 'ukuqala kwakhona'. Jonga ukuba impazamo enye iyenzeka kwakhona. Ukubuyisela iiVenkile zoHlaziyo lweWindows yeWindowsNdlela yesibini yokubuyisela izinto kuHlaziyo lweWindows.
Ukwenza oku, kuya kufuneka uyeke iiBITS kunye neeNkonzo zoHlaziyo lweWindows. Emva koko qalisa umyalelo wokukhawuleza njengomlawuli kwaye ukhuphe le miyalelo ilandelayo emva komnye: Emva koko unike igama kwakhona iifolda zokuxhasa isoftware esasaziweyo usebenzisa le miyalelo ilandelayo: Emva koko bhalisa zonke iifayile zenkonzo ye-BITS kunye noHlaziyo lweWindows yeWindows ngale miyalelo ilandelayo. ...
Emva kokubhalisa kwakhona, qalisa iinkonzo ezinqunyanyisiweyo zangaphambili zoluhlu lwayo yonke imiyalelo, jonga inkcazo engezantsi kwinqaku, ukuze uzisindise ubunzima bokungena kuzo nganye nganye kwi-Prompt yomyalelo, kungcono ukwenza ifayile yebhati. ngale miyalelo Unokubukela elinye lamanqaku ethu ukubona indlela yokwenza ifayile enjalo kwaye ikhonkco lingaphantsi kwenqaku elingezantsi. Ukubuyiselwa kwenkqubo ukuba impazamo iyaqhubeka kwaye into elandelayo onokuzama ukuyibuyisela kwinkqubo yakho.
Oku kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela ukuba ulungiselele iinkqubo zokhuselo lwenkqubo kwaye wenza indawo yokubuyisela kwindlela yakho yokuqhuba. Ngena 'rstrui' kwibhokisi yokukhangela ukuze usebenzise eli nqaku, emva koko ucofe u-Okulandelayo, khetha indawo yokugqibela yokubuyisela, emva koko 'Okulandelayo' kunye no 'Gqiba'. ayizukuma ide le nkqubo igqitywe.
Khetha 'Ewe' ukuqala inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ikhompyuter iya kuqala kwaye iqale inkqubo kwangoko. Lindela inkqubo ukuba igqibe.
Iifestile zokumisa iifoto
Ukuhambisa ukuGcinwa kweMifanekiso kunye noLawulo ukuba ngaba usabona le mpazamo kwiscreen sakho, sebenzisa ukuSebenza kweMifanekiso yokuSebenza kunye nesiXhobo soLawulo. Esi sixhobo sisebenza kwi-Command Prompt, ngoko ke qala njengomlawuli kwaye ufake lo myalelo ulandelayo: DISM.exe / Online / Ukucoca umfanekiso / Ukubuyisela impilo Le nkqubo izakuthatha ixesha ukuze ilinde igqibe ukusebenza xa ikhompyuter inokudityaniswa kwi intanethi.
Ukucombulula ingxaki ukulungisa le ngxaki, unokusebenzisa isixhobo esisemthethweni seTroubleshooter. Yiya kuseto / uHlaziyo kunye noKhuseleko / ukusombulula ingxaki. Fumana uHlaziyo lweWindows yeWindows kwaye ucofe ku 'Run Troubleshooter'.
Inkqubo izakuqala ukukhangela iingxaki, ukuba zikhona, ungazilungisa ngokunqakraza apha. Usebenziso lomntu wesithathu, Ukulungisa iiWindows Ukuba izixhobo ezakhelwe-ngaphakathi ziyasilela, kukho isixhobo sasimahla apha ukulungisa impazamo ye-Wind ows. Icala elisezantsi kuphela kukuba ayinayo inkxaso yeelwimi ezininzi, ke sisiNgesi kuphela.
Nabani na ohlala ejongana nokubuyiselwa okuxakekileyo ziikhompyuter uya kuqonda izinto zemenyu (kwaye abo bantu ngenene ngabaphulaphuli ekujoliswe kubo kwesi sixhobo) unokuzikhuphela kwiwebhusayithi esemthethweni ngokulandela ikhonkco phantsi kweli nqaku. Qalisa inkqubo kwaye wamkele isivumelwano selayisensi. Yiya kwithebhu 'yokulungisa' kwaye ukhethe 'ukulungiswa okuVulekileyo'. Inkqubo kwiMowudi eKhuselekileyo, kwaye xa oku kusenzeka, iinkqubo zomntu wesithathu ezinjenge-antivirus yakho zinokungena kwindlela yokuzama ukulungisa iimpazamo.
Ungasivala ngokukhuselekileyo esi silumkiso. Apha khetha 'uHlaziyo lweWindows yeWindows' kwaye ucofe ku 'Qalisa ukulungisa'. ukuba inkqubo yokulungisa impazamo iqala; Xa kugqityiwe, uya kucetyiswa ukuba uqalise kwakhona inkqubo ukuze utshintsho luqale ukusebenza.
Intsholongwane nayo inokubangela le ngxaki. Jonga ikhompyuter yakho kwi-malware. Ndwendwela ijelo lethu ukuze ubone inqaku lokususa intsholongwane.
Okokugqibela i-Fi, ukuba onke amaqhinga awasebenzi, konke okuseleyo kukufaka kwakhona okanye ukuseta kwakhona inkqubo yokusebenza. Ndwendwela itshaneli yethu eneenkcukacha zokufunda ngendlela yokwenza oku, kwaye uya kufumana amakhonkco kule nkcazo ingezantsi. Yiyo yonke loo nto okwangoku.
Thumela uluvo ukuze usazise ukuba yeyiphi indlela ekuncedileyo ukusombulula ingxaki kwaye zeziphi ezinye iindlela ozaziyo. Cofa kwindawo ethi 'Like' kwaye ubhalise kwisitishi sethu. Shiya iikhomenti ukubuza imibuzo.
Enkosi ngokubukela. Umnqweno omhle.